current hot news….လေးကိုဆွေးနွေးပေးကြပါ ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » current hot news….လေးကိုဆွေးနွေးပေးကြပါ …….
current hot news….လေးကိုဆွေးနွေးပေးကြပါ …….
Posted by fatty on Jul 31, 2010 in Myanma News, News | 13 comments
စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ်ရဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးအကြောင်းေ၇းထားတဲ့စာအုပ်တွေကို မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးကသံတမန်တဦးကဈေးကွက်ထဲကလိုက်သိမ်းနေပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ဟာ စာပေစိစစ်ရေးကခွင့်ပြုပြီးမှထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကလဲအဲဒီလိုလုပ်တာကိုသဘောတူပေးပါတယ်။ တန်ဘိုးငွေ ကျပ်သိန်း ၂၀ လောက် ဆုံးရှံးသွားရပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံက စာေ၇းဆရာတဦး ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ …….
ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အဖြစ် ………
ကျုပ်တို့နိုင်ငံဒီလောက်တောင် အောက်တန်းကျနေပြီလား …………….
ဒါတောင် စာရေးသူက အဲဒီခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တချို့အချက်အလက်တွေကို ထည့်မရေးဘဲချန်ထားပေးသေးတယ်။
သူဟာ သူ့တပ်မှုးတွေရှေ့မှာ ၈ျုံကြမ်းကိုသာစားပြပြီး ကွယ်ရာမှာတော့ကိုယ်ပိုင်စားဖိုမှုးနဲ့အစားကျူးတဲ့အကြောင်း ပေါ့ ………
General Than Shwe is opposite that he enjoys expensive meals at public while having poor rice and fish paste at home. You know why? His wife does not let him spend too much out of own expense. I don’t know who is worse.
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက်ထိတောင် ဖိနှိပ်ခံနေရလဲဆိုတာကို… တစ်ခြားနိုင်ငံက သံအမတ်ကတောင် လိုက်သိမ်းတယ်ဆိုတော့…..
ခွင့်ပြုပြိးသားစာအုပ်တောင် ပြန်သိမ်းခံရတာ ကြည့်ကြပါအုံး အရပ်ကတို့ရေ။
သံရုံးဝန်ထမ်းက လိုက်ကောက်တယ်ထားဦး..။ ဆိုင်တွေက ဘာဖြစ်လို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးသလဲ..မရှင်းပါ။
စာအုပ်ထဲပါတဲ့သတင်းတွေ။ အချက်အလက်တွေက မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့…အဲဒါကို မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးက မြန်မာနိုင်ငံတရားရေးအရ..ပုဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုနဲ့ တရားစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်…
စွဲပြီးမှ..အမှုရှုံးရင်…တရားရေးအရဆုံးဖြတ်ရမဲ့ကိစ္စမျိုးပါပဲ..။ နိုင်ရင်တော့.. နစ်နာကြေးပြန်တောင်းပေါ့.။
ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ အနည်းဆုံးတော့ စာအုပ်ကနာမယ်ကြီးနေပြီပဲလေ..။ကျုပ်တောင် ၀ယ်ဖတ်ကြည့်နေချင်ပြီ..။
အကုန်ကျခံပြီးမှ လိုက်သိမ်းခံရတာကတော့ မကောင်းပါဘူး
ကိုခိုင်ပြောတာ မှန်တယ် ဒါမျိုးက အစိုးရဘက်ကနေ တရားဝင် လုပ်ရမှာ တဖက်သံရုံးက လူက လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာတွေကို စော်ကားသလိုဖြစ်တယ် ပြီးတော့ တန်ကြေးပေးပြီး ၀ယ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ကြိုက်သလောက်ဝယ် ကျသလောက်ရှင်း ဖြစ်ရမှာပေါ့။ အနိုင်ကျင့်တဲ့ သဘောမျိုး လုပ်တာဆိုရင်တော့ လုံးဝ မတရားပါဘူး။
ကျနော်သိသလောက်ကတော့ နစ်နာကြေး မရပါဘူး။ စာေ၇းသူေ၇ာထုတ်ဝေသူပါ ဘာမှမပြောရဲကြပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းလောက အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ တော်တော်ခံပြင်းနေကြပါတယ်။ အချုပ်အချာအာဏာနဲ့ဆိုင်လာပြီထင်ပါတယ်။
ကျူးကျော်စော်ကားပြလိုက်တာပါဘဲ။ အစိုးရသက်ဆိုင်သူတွေကတော့ ဆိုင်တွေအားလုံးကိုေ၇ာ ထုတ်ဝေသူကိုေ၇ာ မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်း လဲသိရပါတယ်။ စာေ၇းသူဆိုတာ biographyေ၇းရင် သူများတွေဆီက အကိုးအကားတွေနဲ့ရေးရတာပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားမေးလို့ရတာမှမဟုတ်ဘဲ။ သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေပါနေတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြပါတယ်။
If this news is true, it shows Burmese military leaders are slaves and followers of Foreign powers. First, they are true prostitutes owned by Chinese communists. Now their image gets clearer in eyes of doubters and swingers/opportunists. They are really traitors of Burma if they submit themselves to the extreme order of communist North Korean. Burmese patriots among the dictators` army must now rise up against the incompetent traitors/leaders to save the name of mother country and army. NLD should issue the directive to all the soldiers to turn the gun against the dictators. The traitors must be punished in military tribunals empowered by democratically elected civilian administration. I am calling all soldiers in Burma in the name of mother country to arm themselves against the nearest traitors of Burma. It is Than Shwe & Co.
I confirmed this news and also you all are requested to get in touch with VOA or RFA WEBS
ဒါများကွာ သူတို့လိုက်သိမ်းတာမှန်ရင်တကယ်တစ်ခုခုထူးလို့ပေါ့ ။ သူတို့လိုက်သိမ်းလည်းမထိရောက်တဲ့နည်းတော့ရှိတယ် ။ စာရေးသူကတော့ဘာမှအကျိုးခံစားခွင့်ငွေးကြေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူး ။ အဲ့ဒီနည်းက ebook လုပ်ပြီး ဖြန့်တဲ့သဘောပါ ။ သူတို့မဖတ်ချင်လို့ လိုက်သိမ်းတဲ့စာအုပ်ကို အဲ့ဒါမျိုးဝေရင် … တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ ။
စာနယ်ဇင်းလောက ကလူတွေ ထက်ထက်ကိစ္စကြီးနဲ့ ရှုပ်နေလို့ ဒါမျိူးတွေကိစ္စလေးတွေ